YANDEX MPANDIKA TENY HO AN'NY FIREFOX - MOZILLA FIREFOX - 2019
Tena Mozilla Firefox
Yandex.Translate ho an'ny navigateur Mozilla Firefox
Mpisera maro amin'ny ordinatera miaraka amin'ny CPU ho an'ny Intel Task Manager hkcmd.exe tsy hay takarina, izay mety ho diso amin'ny viriosy. Androany dia hitantara ny tena maha izy azy isika.
Fampahalalana momba ny hkcmd.exe
Ny antontan-drakitra executable hkcmd.exe dia ampahany amin'ny mpamily rafitra Intel, izay tompon'andraikitra amin'ny mety amin'ny fampiasana ny fanalahidy hotete mba hampifanaraka ny fomba fiasa. Tsy singa fototra iray.
Ny process hkcmd.exe dia manomboka ny Commandant Intel Hotkey, izay manome ny mpampiasa mahazo ny fichier clavier izay ahafahanao mampihatra ny sasantsasany amin'ny kapila video natsangana ao amin'ny CPU.
Ity modely ity dia manomboka amin'ny rafitra ary miasa ao ambadiky, tsy mandany RAM maherin'ny 1-5 MB ary tsy mamorona entana amin'ny processeur.
Azonao atao ny manamarina ny rakitra doka hkcmd.exe azo atao:
Call "Atombohy" ary midira ao amin'ny bara fitadiavana hkcmd.exe. Tsindrio PKM ao amin'ny rakitra hita ary mifidiana File Location.
Hanomboka "Explorer"izay tokony hanokafana ny lahatahiry C: Windows System32.
Raha toa ka misy olon-kafa misokatra ho an'ity lahatahiry ity, dia misy otrikaretina VIH.
Fanidiana ny dingana
Ny fifehezantsika izay heverintsika dia tsy fifehezana ny rafitra, noho izany dia tsy hisy fiantraikany amin'ny Windows amin'ny fomba rehetra izany, na izany aza dia mety hitranga aorian'izany ny olana amin'ny fidirana amin'ny tontolon'ny rafitra fantsona Intel.
Sokafy Task Managerfind in it hkcmd.exe ary tsindrio havanana eo aminy. Ampiasao ao amin'ny menu context ny zavatra "Fenoy ny dingana".
Ampitahao ny fanidiana indray amin'ny fanindriana ny bokotra indray. "Fenoy ny dingana".
Raha te hanala ny ampahany amin'ny fanombohana ny rafitra ianao dia ampiasao ity fomba manaraka ity:
Mandehana any "Desktop" ary tsindrio havanana amin'ny habaka malalaka. Farito, mifidiana ny singa "Safidy momba ny sary", avy eo - "Shortcut"eo amin'ny tsindrio ny safidy "Miala".
Fanafoanana ny aretina
Ny rakitra exe izay mihazakazaka hkcmd.exe matetika dia lasa lasibatry ny viriosy karazam-bary. Ny soritr'aretina olana hafa ankoatra ny toerana hafa ankoatry ny ordinatera System32 dia fihenam-bava avo lenta avo lenta. Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny antibiotika dia afaka miatrika loza tahaka izany, fa raha toa ka tsy namaly ny rindrambaon-tsarimihetsika noho ny antony maromaro Dr. Web cureit.
Raha fintinina dia marihintsika fa raha tsy misy ny fepetra ampiasain'ny Antivirus vaovao farany amin'ny daty vaovao, ny hkcmd.exe dia tsy voavaha.
https://termotools.com mg.termotools.com © Mozilla Firefox 2019